Hiragasy goavambe :: Hifanatrika ry Sahondrafinina Zanany sy Raveloson Jean Ba • AoRaha
Hiragasy goavambe Hifanatrika ry Sahondrafinina Zanany sy Raveloson Jean Ba
Donan’ny samy ngeza ny adin-kiragasy hatao etsy amin’ny kianjan’ny Kanto Mahamasina, amin’ny alahady 3 novambra ho avy izao, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Hifanandrina eny an-kianja amin’io fotoana io ny tarika Sahondrafinina Zanany avy any Fenoarivo sy ny tarika Raveloson Jean Bà, avy any Arivonimano.
Raha ny fahafantarana ireto tarika ireto, samy manana traikefa matanjaka eo amin’ny filalaovana ny adin-kiragasy lehibe toy izao, ry zareo. « Efa nisy fifanatrehana teo amin-dry Sahondrafinina sy Raveloson tany aloha, saingy hiavaka ny amin’ity indray mitoraka ity », araka ny fanazavan’ny mpikarakara. Samy manana mpikabary ikoizana ny an-daniny sy ny an-kilany. Ny mpihira sy mpandihy ary ny mpitendry zavamaneno, ireo andrarezina eo anivon’ny tarika tsirairay no ho eny an-kianja.
Tanjona amin’izao hetsika izao ny hampiroboroboana, hikolokoloana ary hitehirizana ny hira gasy, izay vakoka ara-javakanto sy ara-kolontsaina mampiavaka an’i Madagasikara. Ankoatra izay, mbola mitoetra hatrany ny maha fitaizana feno sy fialam-boly mahasondriana ny hira gasy ka tokony hojerena manokana ny olan’ny tsy fahampian’ny kianja ilalaovana azy.
Savorovoro teny Ankatso :: Niafara tamin’ny fahamaizan’ny tanety ny fitokonan’ny mpianatra